Wararka Maanta: Jimco, Jan 24, 2014-Al-shabaab oo Howlgal ay dad ku Qabatay ka Sameysay Baardheere
Goobjoogayaal ayaa sheegay in howlgallada ay sameeyeen ciidammo aad u hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab, dadka la qabtayna ay u badan yihiin dad ka ganacsada jaadka oo horay kooxdu ay uga mamnuucday deegaannada ay ka taliso in lagu iibiyo.
“Dadka la qabqabtay tiradoodu waxay ka badan tahay boqol qof, waxaana loo haystaa inay ka dambeeyeen dab dhawaan la qabadsiiyay guryo ku yaalla degmadaas,” ayay yiraahdeen goobjoogayaal sababo ammaan awgood uga gaabsaday magacyadooda.
Al-shabaab ayaan iyadu weli ka hadlin howlgalka ay ka sameysay degmada Baardheere oo ka mid ah degmooyinka ay kaga sugan tahay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii dab la qabadsiiyay guryo ku yaalla degmada Baardheere, iyadoo Al-shabaab ay ku eedeynayso inay arrintaas ka dambeeyeen ganacsatada Jaadka oo dhowr jeer laga gubay jaad ay ka keeneen dalka Kenya.
Dadka howlgalka lagu qabqabtay ayaa lagu hayaan saldhigyo ay Al-shabaab ku leedahay degmadaas, iyadoo aan la ogeyn go’aanka ugu dambeeya ee ay kooxdu ka qaadanayso.
Gobolka Gedo ayaa laba degmo oo ka tirsan waxaa gacanta ku haysa Al-shabaab, kuwaasoo kala ah Baardheere iyo Buurdhuubo, iyadoo dhowr jeer la isku dayay in laga qabsado, balse lagu guul-darreystay.